अभिनयको क्रस मोडमा हमाल - कुराकानी - साप्ताहिक
विवाहको प्रसंगमा बच्चै छु
राजेश हमाललाई पछिल्ला दुई वर्षदेखि अभिनय क्षेत्रमा देखिएको छैन । कुनै न कुनै भूमिकामा निरन्तर देखा पर्दै आएका हमाल एकाएक अभिनय क्षेत्रमा नदेखिँदा उनले २८ वर्ष लामो अभिनय यात्राबाट अब विश्राम लिएका हुन् त ? वा उनलाई सुहाउँदो भूमिका चलचित्रमा नभएको हो ? वा हमाल आफैंले नयाँ पुस्ता र प्रकृतिका चलचित्रमा काम गर्न नचाहेका हुन् ? हमाल स्वयं पनि यी प्रश्नको सामना गरिरहेका छन् । आफ्ना पछिल्ला चलचित्र ‘बाग्मती’ र ‘शकुन्तला’ व्यवसायिक रूपमा असफल भएपछि उनी वैवाहिक जीवनमै रमाइरहेका छन् ।
नेपाल पहिलेको नेपाल रहेन, तर राजेश हमाल पहिलेकै राजेश हमाल हो । त्यो इतिहास बोकेको राजेशलाई अभिनयमा किन कम देखिएको ?
वास्तममै यो पहिलेकै राजेश हमाल हो । जबसम्म नेपाली चलचित्र र माया गर्ने दर्शकहरूको अस्तित्व रहन्छ तबसम्म म दर्शकहरूमाँझ आइरहन्छु । चलचित्र शकुन्तलापछि मेरो अभिनयमा केही ग्याप आयो, सायद यो अभिनययात्राको एउटा मोड पनि होला, तर म हराएको छैन, म नेपाली सिने क्षेत्रमै छु ।
दर्शकको अपेक्षा पनि त होला नि, राजेशलाई निर्देशन वा निर्माणको क्षेत्रमा हेर्ने ?
हो, मैले पनि सोचेको छु । यति लामो जीवन चलचित्र क्षेत्रमा बिताएको छु, अहिलेसम्म सिकेको ज्ञान र क्षमतालाई कुनै न कुनै माध्यमले यही क्षेत्रमै लगाउँछु । गम्भीर तयारी पनि भैरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा खुबै देखिनुहुन्छ । तपाईंको वैवाहिक जीवनका स्वर्णिम पलहरू पनि देखिन्छन् सञ्जालमा । विवाहले राजेशलाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ ?
मेरा सयौं फेक आईडी थिए तर म स्वयं त्यसमा थिइनँ । दर्शक तथा शुभचिन्तकहरूको आग्रहमै मैले सामाजिक सञ्जालमा उपस्थिति जनाएको हुँ । दर्शकहरूलाई आफ्ना बारेमा जानकारी दिने उपयुक्त माध्यमका रूपमा लिएको छु मैले यसलाई । प्रेमले मानिसलाई ऊर्जा नै दिन्छ तर समयसँगै जिम्मेवारीले अझ परिपक्क बनाउँदो रहेछ । विवाहले मलाई जिम्मेवारीबोधसँगै जीवनको महत्व पनि बुझाएको छ ।
दुईबाट तीन कहिले हुने भन्ने प्रश्नले कत्तिको सताउँछ ?
हाँसो...... वास्तवमै धेरै । यसलाई मैले सबैको माया तथा सद्भावका रूपमा बुझेको छु । विवाह भएको पनि धेरै भा’को छैन, किन हतार ? विवाहको प्रसङ्मा त म बच्चै त छु । (हाँसो....)